Hlaziya ukuthi i-LED Recordable Smart Blackboard ikulethela ini embonini yezemfundo
Hlaziya ukuthi yikuphi ukunethezeka okulethwa i-LED Recordable Smart Blackboard embonini yezemfundo Izinga lemfundo manje seliyisisekelo esibalulekile sokwahlulela ukuthi izwe linamandla yini, futhi imfundo inesikhundla esiholayo nesiyisisekelo jikelele ekuthuthukisweni kwezomnotho nezenhlalakahle kanye nesizwe...
Yini i-LED Recordable Smart Blackboard?
Yini i-LED Recordable Smart Blackboard? I-EIBOARD LED Recordable Smart Blackboard iyisixazululo sakamuva sekilasi ledijithali lesizukulwane sesi-5. Uma ungacacisi ukuthi i-perferming, sicela ufunde imininingwane engezansi, ngethemba ukuthi izophola. Inkomba: 1. Kungani i-LED Recordable Smart Blackbo...
Ingabe i-kindergarten multimedia ifundisa isikrini sokuthinta ilibona kanjani ikilasi elihlakaniphile?
Lapho i-multimedia ifundisa isikrini sokuthinta ingena ngokuthula ekilasini lenkulisa, yaphawula ushintsho oluyisisekelo endleleni yemfundo enkulisa. Kusukela emabhodini avamile anothuli kuya emishinini yokufundisa yemultimedia engenalo uthuli enencazelo ephezulu yokuthintwa, kusukela ku-cl...
Iliphi inani lohlelo lokusebenza elinikezwa isikrini sokuthinta esisebenzisanayo?
Ngokungeziwe ekunikezeni abantu ngamasevisi emibuzo emibuzo awusizo ahlukahlukene, isikrini esithintwayo esisebenzisanayo singaphinda sibonise ulwazi lomkhiqizo nokukhangisa emshinini nganoma yisiphi isikhathi ngohlelo lokukhishwa kolwazi, futhi singashintsha okuqukethwe okubonisiwe ngokuthanda kwakho kubaphathi emuva...
Imisebenzi emithathu ye-multimedia yenkulisa yonke kuzinhlelo zokusebenza zebhodi elilodwa
I-Multimedia efundisa isixazululo sohlelo lokusebenza konke-in-one, yini imisebenzi yokufundisa enkulisa konke-kukodwa? Ngokusetshenziswa kwemikhiqizo yobuchwepheshe emikhulu emkhakheni wezemfundo, imfundo ehlakaniphile ithuthuka ngokushesha. Njengesisetshenziswa sokufaka, i-multimedia ifundisa konke-kokukodwa...
Izinzuzo ze-EIBOARD Multimedia All-in-one PC
Emkhakheni wezemfundo, amakolishi amaningi namanyuvesi ezweni lonke amukele i-multimedia all-in-one PC njengesizukulwane esisha semishini yokufaka isicelo sokufundisa. Uma kuqhathaniswa nendlela yokuqala yokufundisa, i-multimedia yonke-in-one PC yenza okuqukethwe kokufundisa kucace kakhudlwana, Iphinde yenze ...